Proverb 50 Afo akaiky azo amindroana . [Veyrières 1913 #180]
Proverb 51 Afo hanetroka ny tena . [Veyrières 1913 #6266]
Tandremo fandrao maka afo hanetroka ny tena . [Veyrières 1913 #6251, Nicol 1935 #229]
Tandremo sao maka afo hanetroka ny tena . [Rinara 1974 #4032]
Proverb 53 Afo ka vao motro . [Veyrières 1913 #1046]
Proverb 54 Afo lavitra tsy azo amindroana . [Rajemisa 1985 #208, Rajemisa 1985 #571, Veyrières 1913 #2478, Rinara 1974]
Ny afo lavitra tsy azo amindroana . [Rinara 1974 #2826]
Proverb 55 Afo lavitra tsy azo amindroana ; vary zato tsy enti-mandeha . [Nicol 1935 #488]
Ro tsy atoraka ; vary zato tsy enti-mandeha . [Cousins 1871 #2796]
Vary zato tsy enti-mandeha . [Veyrières 1913 #2260, Rinara 1974 #4883, Houlder 1895]
Proverb 56 Afo maty tsy boronin-dalitra . [Samson 1965 #A8]
Proverb 58 Afo mongo: omana anatiny. [Samson 1965 #A9]
Proverb 59 Afon' ampombo . [Veyrières 1913 #6395]
Proverb 61 Afo tsy mandika raty. [Samson 1965 #A10]
Proverb 72 Aiza hianao no hahita izay mpantsaka tsy mba ho lena ? ary aiza hianao no hahita izay mpisoron' afo tsy mba ho tsemboka ? ary aiza hianao no hahita izay mpandeha tsy mba ho sasatra ? [Veyrières 1913 #1603]
Proverb 658 Arahaba nieren' ny afo . [Veyrières 1913 #4105]
Proverb 1041 Aza manao hoe : efa ho lava ny afon' Antongona . [Rinara 1974 #515]
Aza manao hoe : ho lava ny afon' Antongona . [Veyrières 1913 #6493, Cousins 1871 #463]
Efa ho lava ny afon' Antongona . [Ravelojaona: Firaketana]
Efa ho lava ohatra ny afon' Antongona . [Rinara 1974 #1021]
Ho lava ny afo any Antongona , ka tsy hitan’ Andrianjafy hitairana . [Cousins 1871 #1084, Veyrières 1913]
Ho lava ny afon' Antongona ka tsy hitan' Andrianjafy hitairana . [Rinara 1974 #1368]
Malagasy interpretation Enti-milaza ny antso vonjy, na hataka, miverimberina matetika, ka tsy mahataitra, na mampangoraka intsony. [Ravelojaona: Firaketana]
Proverb 1394 Aza mikiraro ambony kitay , ka manao laniala am-pisoronan' afo . [Houlder 1895 #2152, Veyrières 1913 #2421]
Proverb 1399 Aza mila voa tsy ary ka maka afo amin' ny maty . [Houlder 1895 #1734]
Aza mila voa tsy ary: maka afo amy ny maty . [Cousins 1871 #626]
Proverb 1423 Aza misisika ho may hoatry ny fisoitr' afo . [Veyrières 1913 #6149]
Aza misisika ho may ohatra ny fisoitr' afo . [Houlder 1895]
Fisoitrafo ka may vao misisika . [Rinara 1974 #1170]
Tsy mety raha may misisika hoatry ny fisoitrafo . [Veyrières 1913 #6390]
Tsy mety raha may vao misisika toa fisoitrafo . [Rinara 1974 #4637]
Proverb 1448 Aza mitarika hitsofoka anaty afo toa lehibem--bomanga . [Rinara 1974 #795]
Aza mitarika ho lo toy ny lehibem--bomanga . [Veyrières 1913 #4345, Cousins 1871 #657, Houlder 1895]
Proverb 1565 Azo ny vorona fa ny afo hitonoana no tsy misy. [Houlder 1895 #2268, Veyrières 1913 #3243, Rinara 1974 #833, Cousins 1871 #724]
Proverb 1934 Faly sahirana hoatry ny mpisorona afo homan-koditra . [Veyrières 1913 #5538]
Faly sahirana , ohatra ny mpisoron-afo homan-koditra . [Cousins 1871]
Faly sahirana toy ny mpisorona afo homan-koditra . [Rinara 1974 #74]
Proverb 1972 Fanam-bomangan' Ambohimandroso : tonga any an-kibo vao atanina afo. [Cousins 1871]
Fanam--bomangan' Ambohimandroso : tonga an-kibo vao atanina afo . [Rinara 1974 #1085]
Proverb 2117 Fisoitrafo ka na levona aza ny eo aloha, tsy maintsy aroso ny aoriana. [Rinara 1974 #1171]
Proverb 2262 Hanantsafa mahita, toy ny mpaka afo . [Cousins 1871 #1522]
Manantsafa mahita, toy ny mpaka afo . [Nicol 1935 #325]
Manantsafa ohatra ny mpaka afo . [Rajemisa 1985 #29]
Proverb 2282 Hanina voaray maty afo ka ny vava tsy mba maizina . [Rinara 1974]
Hanina voaray maty afo : ny vava tsy mba maizina . [Veyrières 1913 #4489, Cousins 1871 #1027]
Hanina voaray maty jiro ka ny vava tsy mba maizina . [Rinara 1974]
Proverb 2360 Herin' ny jiro : menaka , fahosan' ny afo : rano . [Houlder 1895 #862, Rinara 1974 #1311]
Proverb 2628 Izaho tsy mahalala sorona, fa sorona afo no fantatro . [Houlder 1895 #84]
Izaho tsy mahalala sorona, fa soron' afo no fantatro . [Veyrières 1913 #6450, Cousins 1871 #1167]
Proverb 2730 Izy main' ny afo natsangany . [Houlder 1895]
Proverb 3127 Lava volon-tsomotra tsy aman-karena : raha mitsoka afo, dia may. [Cousins 1871 #1351]
Lava volon-tsomotra tsy arahin-karena : raha mitsoka afo dia may . [Rinara 1974]
Proverb 3182 Lohan' omby notanehina tamin' ny afon- tain' omby , ka mba masaky ny nalain' ny vavany ihany. [Veyrières 1913]
Loha-omby notanehin-taikomby : masaky ny noraofin' ny lelany . [Veyrières 1913]
Loha omby notenehin-taikomby : masaky ny noraofin’ ny lelany . [Rinara 1974 #125, Cousins 1871 #1370]
Proverb 3237 Mafana vay ohatra ny afom- pantaka. [Rinara 1974]
Proverb 3333 Main' ny afo natsangana . [Rinara 1974 #1900]
Main' ny afo natsangany . [Veyrières 1913 #6071]
Main' ny afo natsangany izy, ary voakaikitry ny amboakely tiany . [Veyrières 1913 #5448]
Proverb 3339 May volon-tanana , ohatra ny mpisorona afo. [Cousins 1871]
May volon-tanana sahala amin' ny mpisoron' afo . [Rinara 1974]
Proverb 3354 Malahelo lava volombava , ka nony mitsoka afo dia may . [Rinara 1974 #131]
Proverb 3528 Manao afon' Analakely : ambony vao midonaka . [Veyrières 1913 #646, Cousins 1871 #1526]
Manao afon' Analakely ka ambony vao midonaka . [Houlder 1895]
Manao afon' Analakely : vao midonaka dia any am-bovonana . [Rinara 1974 #1983]
Proverb 3738 Mandry tsy aman' afo toy ny mpiambim-banja . [Veyrières 1913 #1652, Rinara 1974 #2090, Cousins 1871 #1603]
Proverb 3955 Maty mangina toa afon' ampombo . [Rinara 1974 #2206]
Maty mangina toy ny otrik' afo . [Cousins 1871 #1665, Houlder 1895]
Maty mangina toy ny otrik' afon' ampombo . [Veyrières 1913 #6453]
Proverb 3980 Matoa manentona dia ao ny afo nipoirany . [Rinara 1974 #2184]
Proverb 4057 Miangatra kosa ny velona raha ny maty no anaterana afo ! [Rinara 1974]
Miangatra kosa ny velona raha ny maty no aterana afo . [Veyrières 1913 #2765]
Miangatra kosa ny velona raha ny maty no ateran' afo . [Houlder 1895 #2116]
Proverb 4299 Miroborobo ny afo tsy mba mamindro , ka lany ny kitay vao mamihin-tanana . [Veyrières 1913 #3273, Cousins 1871 #1821]
Miroborobo ny afo tsy mba namindro , fa efa lany ny kitay vao mamihin-tanana . [Rinara 1974]
Proverb 4338 Misorona afo homana . [Veyrières 1913 #2537]
Proverb 4339 Misorona afo homana ka malahelo ny jabora lasam-boalavo . [Rinara 1974 #2415]
Misorona afo homana : malahelo ny jabora lasam-boalavo . [Veyrières 1913 #575, Cousins 1871 #1840]
Proverb 4454 Mitroatra tahaka ny ronono taitran' afo ! [Rinara 1974 #2393]
Proverb 4496 Mivahiny aman-kava-malahelo , ka soron' afo no hita. [Veyrières 1913 #6]
Mivahiny amin-kava-malahelo , ka soron' afo no hita. [Houlder 1895 #1462, Rinara 1974 #161]
Proverb 4727 Nahoana no efa afo , ka vao motro ary efa rano vao mahetsaka ? [Rinara 1974 #2680]
Nahoana no efa afo, ka vao motro ; rano, ka vao mahetsaka ? [Houlder 1895 #2302, Veyrières 1913 #6369, Cousins 1871 #2040]
Proverb 5020 Ny donak' afo no samy miakatra fa ny tompony no mahalala ny ao am-bilany . [Rinara 1974 #2935]
Proverb 5049 Ny fanambadiana ohatra ny menaka , ka raha manalavitra ny afo, dia mandry . [Cousins 1871]
Ny fanambadiana tahaka ny menaka , ka raha manalavitra ny afo dia mandry . [Rinara 1974 #193]
Ny fanambadiana tahaky ny menaka , ka raha manalavitra ny afo dia mandry . [Veyrières 1913 #1216]
Proverb 5320 Ny manjaka toy ny afo : halavirina mangatsiaka , hatonina : mahamay . [Rinara 1974 #3121]
Ny manjaka toy ny afo ; ka raha halavirina mahamangatsiaka , ary raha hatonina akaiky mahamay . [Veyrières 1913 #231]
Ny manjaka toy ny afo : raha halavirina, mahangatsiaka ; ary raha akekena , mahamay. [Cousins 1871 #2329, Nicol 1935 #273]
Ny mpanjaka toy ny afo : raha halavirina mangatsiaka, ary raha akekezina mahamay. [Houlder 1895 #1398]
Proverb 5328 Ny marina toy ny afo , raha fonosina mandoro 
Proverb 5676 Ny vanja tsy mandà afo ary ny afo tsy mandà kitay . [Rinara 1974 #3353]
Ny vanja tsy mandà afo ; ny afo tsy mandà kitay . [Houlder 1895, Veyrières 1913]
Proverb 5903 Otrik' afon' ampombo , ka mangidy mandra-maraina . [Veyrières 1913 #32]
Proverb 5980 Rafotsibe mpisorona afo , ka halan' ny setroka . [Veyrières 1913 #1912]
Proverb 6102 Raha miroborobo ny afo, dia samy mamela tanana hamindro ; fa raha lany ny kitay, ny tompon-trano ihany no manary lavenona . [Nicol 1935 #378, Cousins 1871]
Raha miroborobo ny afo , miara-mamindro ; fa raha maty ny afo , dia ny tompon-trano ihany no manary lavenona . [Cousins 1871, Veyrières 1913]
Raha miroborobo ny afo , miara-mamindro izy rehetra; fa ny tompon-trano ihany no manala ny lavenona . [Houlder 1895 #616]
Raha miroborobo ny afo , miara-mamindro ny rehetra, fa nony lany ny kitay ny tompon-trano no manary ny lavenona . [Rinara 1974 #3616]
Raha velona ny afo , dia samy mamela-tanana hamindro ; fa raha lany ny kitay , dia ny tompon-trano ihany no manary lavenona . [Veyrières 1913]
Proverb 6104 Raha misy afo dia ao ny setroka . [Rinara 1974 #3617]
Proverb 6352 Roborobon' afon' ny mpitakarina , ka izako ihany no hanary lavenona rahefa lasa izy. [Veyrières 1913 #5474]
Proverb 6378 Sabotraka ambony afo : tonta tsy nanahazana . [Cousins 1871 #2815, Rinara 1974]
Tsihy ambony afo : tonta tsy nanahazana . [Rinara 1974]
Tsihivitrana ambony afo : tonta tsy nanahazana . [Veyrières 1913 #2409, Cousins 1871]
Tsihivitrana ambony salazana , ka tonta tsy nanahazana . [Rinara 1974 #4420]
Proverb 6635 Sokina mañatoñ' afo : forohaña atsindry . [Houlder 1895]
Sokina nanaton’ afo : forohana atsindry . [Samson 1965]
Proverb 6636 Sokina mbola any an-davany, ka ny afo hitonoana azy no mahavery hevitra . [Rinara 1974 #3919]
Proverb 6691 Soron' afon' ny ntaolo : ny maty akofoka , ny velona aroso . [Veyrières 1913 #339, Cousins 1871]
Proverb 6692 Soron' afo tsy aritry ny akaiky. [Veyrières 1913 #1710, Rinara 1974 #3955, Cousins 1871 #2942]
Proverb 6759 Tain' omby an-tany mena : raha tsy miomba nofo tsy miala . [Rinara 1974 #3996, Cousins 1871 #2975]
Tain' omby an-tany mena : raha tsy miombona afo , tsy miala. [Houlder 1895 #284]
Tain' omby an-tany mena : raha tsy miombon' afo tsy omena . [Rinara 1974 #3995]
Proverb 6836 Tandroky ny andevovavy ny fisoitra afo : sady mahay manavia , manavanana . [Cousins 1871]
Proverb 7360 Trano misy olona , misy afo , tany misy farihy , misy sahona . [Rinara 1974 #4384]
Proverb 7381 Tsangan' afon' Anjanana : mahita ny ambany, mahita ny ambony. [Rinara 1974 #4396]
Tsangan' afon’ Anjanana : mahita ny ambony, mahatazana ny ambany. [Cousins 1871 #3276]
Tsangan' afon' Anjanana : ny ambony mahita , ny ambany mahatazana . [Veyrières 1913 #3313]
Proverb 7393 Tsara manitra afon' anjavidy , kitain' ny mpanjaka . [Veyrières 1913 #260]
Proverb 7590 Tsy mba ny afo handoro fa ny masoandro anahazana . [Rinara 1974 #4545]
Tsy mba ny afo handoro fa ny masoandro be hanahazana . [Houlder 1895 #1355, Veyrières 1913 #3151]
Proverb 7645 Tsy mety raha may trano vao manao afo am-bilany kely. [Veyrières 1913 #3997]
Proverb 7701 Tsy mety raha setroky ny afo aroson' ny hafa. [Houlder 1895 #2256, Cousins 1871 #3487]
Proverb 7762 Tsy misy maty tsy maimbo ; fa ny afo no maty tsy maimbo. [Veyrières 1913 #2929, Cousins 1871]
Tsy misy maty tsy maimbo , fa ny afo sy fanorona no maty tsy maimbo . [Rinara 1974 #304]
Proverb 8032 Vanja sy afo : raha mihaona mamohehatra . [Rinara 1974 #4852]
Vanja sy afo : raha mihaona, mampidi-doza . [Cousins 1871 #3608, Nicol 1935 #297]
Vatofalia sy afo : isak' izay mihaona mampidi-doza . [Veyrières 1913 #465]
Proverb 8324 Vony tsy azon' afo , vary tsy hanim-pody . [Veyrières 1913 #830]